मनोचिकित्सक डा. रवि शाक्य, गायिका एन्जेला श्रेष्ठ, सन्तूरवादक नियोश कर्माचार्य र विदेशमा रहेका उनीहरूका साथीभाइ फेसबुकमार्फत सांगीतिक कार्यक्रम गर्छन् रएकापसमा जोडिन्छन्।
डा. रवि शाक्यमनोचिकित्सक हुन्। ललितपुर, पाटन अस्पताल मनोचिकित्सा विभागका प्रमुख हुन्। संगीतमा औधी रुचि राख्छन्। संगीत बाजाहरूको संयोजन र धुन मात्रै नभई थेरापी पनि भएको उनी बताउँछन्। ‘अशान्त मनलाई शान्त पार्न, प्रफुल्ल मनमा उत्साह थप्न संगीतको महत्त्व निकै हुन्छ,’ उनी भन्छन्। लकडाउनका बेला डा. रवि फेसबुक लाइभमार्फत संगीत थेरापी लिएर उपस्थित हुने गरेका छन्। एक–डेढ घण्टासम्म उनले साथीभाइलाई विभिन्न मुडका गीत सुनाउँछन्। नेपाली, नेवारी र हिन्दी विभिन्न सदाबहार गीत उनको प्रस्तुतिमा पर्ने गर्छन्।
फेसबुकमार्फत हुने जमघटलाई उनी साथीहरूबीचको आत्मीयता ठान्छन्। भन्छन्¬, ‘हामी घर–घरमा बसेर पनि सँगै छौँ। किनकि, हामी साथ–साथ छौँ र एकअर्काका बारेमा सकारात्मक सोच्छौँ।’ संगीतले आफूहरूलाई महामारीको विषम परिस्थितिमा जोडिन मद्दत गरेको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो समाजमा जन्मेदेखि मृत्युसम्मका संगीत छन्,’ डा. रवि भन्छन्,‘मनोचिकित्सकका नाताले म संगीतलाई निकै महत्त्व दिन्छु। किनकि, संगीतले मानसिक स्वास्थ्यलाई सहयोग गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।’
मनमा कुरा खेल्दा, तनाव हुँदा, निद्रा नलाग्दा संगीतले साथीको भूमिका निर्वाह गर्ने उनी बताउँछन्। फेसबुक लाइभमा डा. रविले गीत मात्रै गाउँदैनन्, लकडाउनमा कसरी मनलाई शान्त राख्ने भनेर सुझाव पनि दिने गर्छन्। कार्यक्रमबाटै उनी सबैलाई संगीत सुन्न र सकिन्छ भनेकुनै एक वाद्ययन्त्र बजाउने प्रयत्न गर्न अनुरोध गर्छन्। ‘यदि बजाउन आउँदैन भने गाउनुहोस्,’ उनी भन्छन्,‘कुनै पनि वाद्ययन्त्र बजाउनु भनेको दिमागका लागि राम्रो व्यायाम हो र यसले दिमागलाई लामो समयसम्म स्वस्थ राख्छ। यो प्रमाणित तथ्य हो।’ मानसिक स्वास्थ्यमा म्युजिक थेरापीका विषयमा थुप्रै अनुसन्धान भएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘केही–केही मानसिक रोग जस्तैः बिर्सने रोग, डिप्रेसन, एन्जाइटीको समस्या भएकालाई म्युजिक थेरापीले मद्दत गर्छ र यसको प्रयोग संसारभरि नै हुनेगरेको छ।’
लकडाउनजस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्न गीत–संगीत निकै महत्त्वपूर्ण साधन रहेकोले नै सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर फेसबुक पेज ‘एक्स–वनस्थलियन क्लब’मार्फत डा. रविले प्रत्यक्ष सांगीतिक कार्यक्रम दिने गरेका छन्। ज्योतिचन्द्र शाह, नियोश कर्माचार्य, राम महर्जन, एन्जेला श्रेष्ठ, प्रभु ढकाल आदि समकालीन र अन्य साथीका साथ उनको प्रस्तुतिचलिरहेको हुन्छ। दुईचार जना साथीमाझ गफैगफमा सुरु भएको सांगीतिक प्रस्तुतिमा ज्योति, राम, प्रभु र एन्जेला पनि थपिएका छन्। कहिले ज्योति आफ्नो मधुर स्वरका साथ विभिन्न गीत लिएर आउँछन्, कहिले नियोश सन्तूर वादनका साथ। कहिले राम बाँसुरीको धुन बोकेर जापानबाट प्रत्यक्ष आउँछन् भने कहिले संगीतका गुरु प्रभु ढकाल गीत गाउँछन्। कहिले एन्जेला आफ्नो सुमधुर स्वर सुनाउँछिन्।अनि, कार्यक्रममा जोडिन्छन्, देश–विदेशका साथीहरू।
कार्यक्रमका आकर्षण हुन्,नियोश। उनको सन्तूर वादनले संसारभरि बसेर हेरिरहेका र सुनिरहेका साथीलाई मुग्ध बनाउने गरेको छ। उनले ‘रेशम फिरिरी’, ‘सिरीमा सिरी नि कान्छी बतासै चल्यो’, ‘नौलाख तारा उदाए’लगायत गीतका धुन बजाइसकेका छन्। सन्तूरको सुमधुर धुन सुन्दा जति मीठो छ, यो बाजा बजाउन र ट्युनिङ मिलाउन उति नै कठिन रहेकोउनी बताउँछन्।
प्रभु ढकाल संगीतका गुरु हुन्। उनका थुप्रै शिष्य अहिले चर्चित गायक बनेका छन्। मीठो स्वरकी धनी एन्जेला श्रेष्ठ व्यावसायिक गायिका हुन्। राम, ज्योति, रवि र नियोश बाल्यकालका साथी हुन्।साथीहरूलाई एकजुट बनाउने सेतु बनेका छन्, अरुणप्रकाश श्रेष्ठ। अरुणकै संयोजनमा भइरहेको छ, भर्चुअल सांगीतिक कार्यक्रम। डा. रवि पाटन हस्पिटलको क्वार्टरमा लकडाउन छन्। नियोश, ज्योति, प्रभु र एन्जेला आ¬–आफ्ना घरमा छन्भने राम जापानमा। संसारका विभिन्न देशमा बसेर प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुतिको मजा लिइरहेका साथीहरू बेला–बेला फर्माइस गर्छन्। ‘लकडाउनको समयमा भएको यो लाइभ सांगीतिक कार्यक्रम फेसबुकजस्तो सामाजिक सञ्जाल नभएको भए सम्भव हुँदैनथ्यो,’ अरुणप्रकाश भन्छन्।